नेपाली सेनाद्वारा विद्यालय भवन मर्मत – |Radio Burtiwan| burtibang khabar
६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६ March 20, 2019 manak	0 Comments
पानी पर्दा चुहिने दैलेखको एक सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण भवन मर्मत गरिएको छ । नेपाली सेनाको इन्द्रदल गुल्म दैलेखले उक्त भवन मर्मत गरेको हो ।
सेनाले दैलेखको नारायण नगरपालिका–११ जुफियामा रहेको वडाभैरव आधारभूत विद्यालयको तीनकोठे जीर्ण भवन मर्मत गरेको हो । जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त भवन दुई लाख रूपैयाँ लागतमा मर्मत गरिएको इन्द्रदल गुल्म दैलेखका गुल्मपति सुनिलकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
‘भवन मर्मतका लागि एक साता अघिदेखि नेपाली सेनाका अधिकृत तथा २० जवान विद्यालयमै खटिएका थिए’, गुल्मपती मल्लले भने, ‘विद्यालयको भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै नारायण नगरपालिकाको आग्रहपछि सेनाको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विद्यालयको भवन मर्मत गरेका हौं।’
पत्थरको छानो रहेको उक्त भवन पानी पर्दा चुहिने र भत्कने अवस्थामा रहेको थियो ।
नेपाली सेनाले जीर्ण भवनको छानो टिन (कर्कट पाता) ले छाएको छ भने भवनमा रङरोगनसमेत गरेको छ । मर्मतपछि उक्त भवन टाढाबाटै हेर्दा सुन्दर देखिएको छ । सेनाद्वारा मर्मत गरिएको भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न पुगेका नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण कार्य गरेको धारणा राखे ।
‘यसअघि यहाँ आउँदा भवन भत्कने तरखरमा थियो’, उनले भने, ‘सेनाले थोरै बजेटमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको बताउँदै नगरप्रमुख खड्काले आगामी आर्थिक वर्षमा सोही विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाली सेनाले समुदायको आवश्यकताका आधारमा गरेको सामाजिक कार्यले विद्यालयलाई राहत पुगेको बताए ।
आर्थिकरूपमा कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन निर्माण गरेर सेनाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सजिलो बनाइदिएको उनको भनाइ थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनसरा थापाले आर्थिक श्रोत कमजोर भएको विद्यालयमा सेनाले जीर्ण भवन मर्मत गरिदिएकामा धन्यवाद दिए ।
भवन मर्मत कार्य गरेपछि विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सजिलो भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रत्नबहादुर मल्लले बताए ।
यसैबीच सेनाले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खेलकूदका सामग्री प्रदान गरेको छ । भवन मर्मत गर्दा आवश्यक सामग्री खरीद गरी बचाएको रकमले विद्यालयमा भलिबल, नेटलगायतका खेलकूद सामग्री प्रदान गरेको गुल्मपति मल्लले जानकारी दिए ।
← भिडियो ब्लग: के नेपाल भन्ने देश महिलाको थोरै, पुरुषको धेरै हो?
अस्ट्रेलियामा विजयको सफलता →
निसिखोलाका कृषकहरुलाई व्यवसायिक बाख्रापालन सम्बन्धि भेटिनरी तालिम आज देखि सुरु ।। ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६
नगरप्रमूख नेपाली सहितको टोलीद्धारा बुर्तिबाङका ३ ओटै परिक्षा केन्द्रको अनुगमन । ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६
अर्गानिक खेती प्रणालीले साह परिवार माडीकै नमुना किसान ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६
गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ? ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६
पानीजहाज आउँदैछ, बबण्डर गर्नेबेला भएको छैनः देवेन्द्र पौडेल ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६